ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် သိသင့်သော အကြောင်းအရာများ | iMyanmarHouse.com
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန် သိသင့်သော အကြောင်းအရာများ
iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း) မှ​ရောင်းချ​ပေး​နေ​သော ထိုင်းနိုင်​ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေမှ ကွန်​ဒိုများ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ကမ်းခြေရှိ Wyndham Hotel - Laya Resort
Project Location Survey no, 4560, Choeng Thale Subdistrict, Thalong District, Phuket, Thailand 83110. မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်ကမ်းခြေတွင် ကြယ်ငါးပွင့်အဆင့်ရှိ နာမည်ကြီး Wyndham ဟိုတယ် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အထူးအခွင့်အရေးဖြစ်ပါသည်။ Facilities All day dining Restaurant Pool Bar Swimming Pool Roof Top Bar Wet Land Club house Lobby Business meeting Room Spa Room GYM Project...
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း)သည် ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခတ်ကမ်းခြေရှိ နာမည်ကြီး Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်း၏ Laya Resort တွင် မြန်မာနိုင်ငံသားများ အလွယ်တကူ ဝယ်ယူ ရင်နှီးမြှုပ်နှံနိုင်ရန်အတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးလျှက်ရှိပါသည်။
iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) မှ Wyndam ဟိုတယ်လုပ်ငန်း ၊ Laya Resort ရှိ ဟိုတယ်ခန်းများကို မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ရောင်းချထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Contact Name : Hninn Wai Wai (Project Sales Manager), Thet Naing (Marketing Executive),
Lwin Mar Kyaw (Project Sales Executive), Win Nandar Tun (Project Sales Executive)
Hot Line : 09-768922215, 09-768922211
Email : hninnwaiwai@imyanmargroup.com, thetnaing.imyanmarhouse@gmail.com,
Address : No 561/567, MAC Tower, 11th Floor, Merchant Road (Corner of Mahabandoola Garden Road & 35th Street), Kyauktada Township.
ဤ ဝန်​​ဆောင်​မှု နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ဝင်စားပါက အောက်ပါဖောင်တွင် ဖြည့်စွက်၍ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
ဤ ဝန်​​ဆောင်​မှု အကြောင်း အသေးစိတ်သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ ပြန်လည်ဆက်သွယ်ပေးပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် ဘယ်လိုရင်းနှီးမြှပ်နှံမလဲ။
1. သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော ဟိုတယ်အခန်းကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူလိုက်ပါ။
2. ဘတ် ၃၀၀၀၀ - ၅၀၀၀၀ ဝန်းကျင် စရံငွေချရပါသည်။
3. Developer နှင့်ဝယ်ယူမှု စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီး Down Payment ကိုပေးချေရပါမည်။ Down Payment အနေဖြင့် စုစုပေါင်းကျသင့်ငွေ၏ ၁၀%ကိုပေးချေရပါမည်။
4. ဝယ်ယူသူအတွက် ပရောဂျက်လေ့လာရေး ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
5. ကျန်ရှိသောငွေ ၉၀% ကို အရစ်ကျပေးသွင်းခြင်း (သို့) လက်ငင်းငွေချေစနစ်ဖြင့် ပေးချေနိုင်သည်။
6. ဝယ်ယူသူမှ ထိုင်းနိုင်ငံ အစိုးရထံသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲခ (Transfer Fee) အဖြစ် ဝယ်ယူထားသော ကျသင့်ငွေ၏ ၁% ကိုပေးဆောင်ရပါမည်။
ဝယ်ယူသူမှ နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်ဖွင့်ထားလျှင် ကိုယ်တိုင် Developer ဘဏ်အကောင့်သို့ USD (သို့) SGD ဖြင့် တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲနိုင်သည်။ နိုင်ငံခြားဘဏ်အကောင့်မရှိသူများအတွက် iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း)မှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
မှတ်ချက်။ မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ငွေလွှဲခွင့်မရှိပါ။
အထက်ပါ ဝယ်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ အားလုးံကို ဝယ်ယူသူများ အလုးံစုံစိတ်ချမ်းမြေ့စွာ အလွယ်တကူ ဆောင်ရွက်နိူင်ရန် အတွက် iMyanmarHouse.com (အိုင်​မြန်​မာ​ဟောက်​စ်​​ဒေါ့ကွန်း)မှ အစမှ အဆုးံတိုင်အောင် ဝန်ဆောင်မှုပေးလျှက် ရှိပါသည်။
၂။ ဘာကြောင့် Phuket - Laya Resort တွင် ဝယ်ယူရင်းနှီးမြှုပ်နှံသင့်သလဲ?
Tourism Authority of Thailand 2017 ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များအရ ဖူးခတ်သို့ ခရီးသွား ဧည့်သည် (၈.၄) သန်းကျော် လေးနှစ်ဆက်တိုက် စံချိန်တင်ဝင်ရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။
ဖူးခက်ကျွန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းတွင် ထိုင်းအစိုးရကိုယ်တိုင် ကြီးကြီးမားမား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ထားပါသည်။
CBRE (2018 H1) မှ ဖူးခတ်သို့ နိုင်ငံတကာမှ ခရီးသွားဧည့်သည်များ လာရောက်နှုန်း နှစ်စဉ် (၂၂.၆%) ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်လာကြောင်း ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ခရီးသွားမှတ်တမ်းအရ ဖူးခတ်ဟိုတယ်များတွင် ခရီးသွားများတည်းခိုမှုသည် Peak Season ဆိုလျှင် (၉၀%) ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပြီး၊ Low Season ဆိုလျှင် ( ၅၀%) ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ဟိုတယ်တည်းခိုမှု ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် နှစ်စဉ် (၆၀%) မြင့်တက်လာကြောင်း တွေ့ရ သည်။
ဟိုတယ် တည်းခိုစရိတ်များသည် (နေ့စဉ်နှုန်း) အနေဖြင့် (၆.၇%) ရာခိုင်နှုန်းတိုးတက်လာကြောင်း သိရသည်။
ဖူးခက်ကျွန်း၏ အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်းတွင် ထိုင်းအစိုးရကိုယ်တိုင် ကြီးကြီးမားမား ရင်းနှီး မြှုပ်နှံ ထားခြင်း
- (၁) နှစ်လျှင် ခရီးသွားဧည့်သည် (၁၀) သန်းလက်ခံနိုင်ရန် ဖူးခက်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကြီးအား ဘတ်သန်း( ၆၀)ကုန်ကျခံပြီးတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
- ဖူးခက်လေဆိပ်၊ ဖူးခက်မြို့တွင်းနှင့် ဖန်ငံဒေသ အထိချိတ်ဆက်ပေးမည့် (၅၈.၅) ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော မြေအောက်ရထားအတွက် ဘတ်ငွေ (၃၅) မီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
- ဖူးခက်လေဆိပ်နှင့် ဖူးခက်ကျွန်းရှိကမ်းခြေ များသို့ ပြေးဆွဲပေးသော စူပါဘတ်စ် များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
- ဖူးခက်မြို့မှ Patong ထိ ၁၅ ကီလိုမီတာရှည်လျားသော မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းများ တူးဖောက်ပေးခြင်း
၃။ LAYA Resort ၏အဓိကကျသော တန်ဖိုးများ
တည်နေရာ - အရ Layan ကမ်းခြေနှင့် မီတာ ၄၀၀ အကွာအဝေး ၊ Sirinat အမျိုးသားဥယျာဉ်နှင့် ကပ်လျှက်တည်ရှိခြင်း၊ ဖူးခက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ မိနစ် ၂၀ အတွင်း ရောက်ရှိနိုင်သော နေရာတွင် တည်ရှိခြင်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှ ပြန်လည်ရရှိမှု ငွေပမာဏများခြင်း
- Wyndham ဟိုတယ်အုပ်စုမှ စီမန်ခန့်ခွဲပေးမည် ဖြစ်သည်။ အငှားအာမခံဝင်ငွေ (၁၅) နှစ် Grantee ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး၊ ပထမ (၅) နှစ်တွင် ငှားရမ်းမှု ပုံမှန်ဝင်ငွေ (၇%) ရာခိုင်နှုန်း ပေးအပ်ခြင်း။
ပရောဂျက်သည် လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်သော ဧရိယာတွင်တည်ရှိခြင်း။
- အာရှထိပ်တန်း (၁၀) ခုတွင်အပါအ၀င်ဖြစ်သော Languna Golf Phuket နှင့်(၁.၉) ကီလိုမီတာအကွာအဝေးတွင်ရှိခြင်း။
- Central Shopping Center နှင့် (၃.၆) ကီလိုမီတာ တွင်တည်ရှိခြင်း၊ ဖူးခက်၏ အကြီးဆုံးရေကစားကွင်း Blue Tree Lagoon နှင့် (၇) ကီလိုမီ တာတွင် တည်ရှိခြင်း။
- ကမ္ဘာထပ်သီးဟိုတယ်များဖြစ်သော Trisara နှင့် Anantara တို့ အနီးတွင်တည်ဆောက် ထားခြင်း။
- ဟိုတယ်၏ ဖွဲ့စည်းဆောက်လုပ်ပုံမှာ တည်းခိုသူများသည် ကိုယ်တိုင် အပြင်ထွက်စရာမလိုပဲ ဟိုတယ်အတွင်း အနားယူနိုင်စေရန် မြေဧက အကျယ်အ၀န်း၏ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်းကို facilities အနေဖြင့် ရေကူးကန်၊ ၂၄ နာရီဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်သော စားသောက်ဆိုင်၊ အားကစာခန်းမ၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၊ Spa နှင့် Pool bar များထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားခြင်း။
၄။ ကမ္ဘာအဆင့်မှီဟိုတယ်များစွာရှိသည့်အနက် ဘာကြောင့် Laya ကိုရွေးချယ်သင့်သလဲ။
Laya Resort ပရောဂျက်အနီးတည်ရှိနေသော -
Trisara ၏ တစ်ညတည်းခိုခ သည်
- ခရီးသွားများရာသီ - ၅၂,၃၀၀ ဘတ်
- ခရီးသွားနည်းရာသီ - ၂၈,၀၀၀ ဘတ်
Anantara ၏ တစ်ညတည်းခိုခ သည်
- ခရီးသွားများရာသီ - ၃၂,၀၀၀ ဘတ်
- ခရီးသွားနည်းရာသီ - ၂၇,၀၀၀ ဘတ် အစရှိသဖြင့် ဈေးနှုန်းမြင့်မားစွာရှိသည်။
သို့သော် Laya Resort ၏ တစ်ညတည်းခိုခ သည်
- ခရီးသွားများရာသီ - ၆၈၀၀ ဘတ်
- ခရီးသွားနည်းရာသီ - ၄၅၀၀ ဘတ် ပျှမ်းမျှ တစ်ည ၀င်ငွေ - ၅၆၀၀ ဘတ် နှင့် တစ်နှစ်လျှင် ဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှု နှုန်း ၇၀ ရာခိုင်နှုန်း ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်ဆိုလျှင်လည်း ဘယ်ဟိုတယ် ကိုရွေးချယ်တည်းခိုမလဲ???
(အဆိုပါတွက်ချက်မှုကိန်းဂဏန်းသည် ဆောက်လုပ်သူကိုယ်တိုင် ဈေးကွက်ကိုသုတေတန လုပ်ဆောင်ပြီး ရရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။)
Laya တွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းဖြင့် သင်၏ လစဉ်ဝင်ငွေသည် ကျပ်ငွေ သိန်း ၂၀ ၀န်းကျင်နှင့် တစ်နှစ်လျှင် ကျပ်ငွေသိန်း ၂၅၀ ခန့်ဝန်းကျင်ရရှိမည်။
၅။ Laya ကို စီမံခန့်ခွဲမည့် Wyndham Hotel Group အကြောင်းတစေ့တစောင်း
နိုင်ငံတကာဟိုတယ်နှင့် အပန်းဖြေစခန်းကို စီမံခန့်ခွဲပေးပြီး အမေရိကန် အခြေစိုက် နယူး ဂျာစီတွင်ရုံးချုပ်တည်ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့အခြားမြို့များဖြစ်သော လန်ဒန်၊ ဟောင်ကောင်၊ ရှန်ဟိုင်း၊ ပေကျင်း၊ စင်ကာပူ နှင့် နယူးဒေလီမြို့တွင် ၀န်ထမ်းပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ဖြင့်လည်ပတ်နေသည်။
ဟိုတယ် ပေါင်း ၉၀၀၀ ကျော် brand ပေါင်း ၂၀ ကျော် နှင့် နိုင်ငံပေါင်း ၈၀ ကျော်တွင် Wyndham ကစီမံခန့်ခွဲပေးလျှက်ရှိပြီး နယူးယောက်စတော့အိပ်ချိန်းတွင်လည်း ဇွန်လ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် စာရင်းသွင်းထားပြီးဖြစ်ကာ WH ကုဒ်ဖြင့်ဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
၆။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်
လွယ်ကူသက်သာစွာ ငွေပေးချေပြီး ပြန်လည်ရရှိမည့် အကျိုးအမြတ်များခြင်း
- (လစဉ်ဖြစ်စေ၊ ပရောဂျက်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမှု အခြေနေအရဖြစ်စေ ငွေပေးချေနိုင်ခြင်း။)
ငှားရမ်းမှုမှ ၁၅ နှစ်တာ ၀င်ငွေရရှိရန် အာမခံခြင်း
- (ပထမ ၅ နှစ်တွင် ငှားရမ်းမှု ၀င်ငွေ (၇%) ရာခိုင်နှုန်း နှင့် ဒုတိယ ၁၀ နှစ်တွင် ဟိုတယ်မှ အသားတင်အမြတ်ခွဲဝေခြင်း။)
ကြယ်ငါးပွင့်ဟိုတယ်တွင် အရင်းအနှီးနည်းနည်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့်အပြင် ပိုင်ရှင်များအတွက် အခမဲ့တည်းခိုခွင့်ရရှိနိုင်ခြင်း
- (ခရီးသွားများသည့်ရာသီတွင် ၁၅ ရက် သို့မဟုတ် ခရီးသွားနည်းသည့်ရာသီတွင် ၃၀ ရက် စသဖြင့် ရွေးချယ် တည်းခိုခွင့်ရရှိနိုင်သည်။)
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ
ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်ကို ကြည့်ရန်